Manamboatra Smart - Ningbo Runner Co., Ltd.
Amin'ny lafiny fanodinana ara-materialy, famonoana vy & fametahana vy, fitsaboana ambony, fivoriambe ary famonosana, NINGBO RUNNER dia nahavita automation avo lenta ary namorona lamina fikirakirana feno. Ho an'ny fandrakofana ny rohy tsirairay amin'ny tolo-kevitry ny fanatsarana, ny hetsika RIT (Runner Manatsara ny ekipa) asa fivelomana sy ny rafitra sisintany na ny tetikasa lehibe, dia nanangana ny rafitry ny fitantanana Runner Production System (RPS) izy miaraka amin'ny toetra RUNNER ary ny tanjon'ny "fahombiazana ambony, kalitao avo lenta ary faharanitan-tsaina" amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fomba sy ny fanovana manan-tsaina.
01 MANORATRA PLATFORM
NINGBO RUNNER dia nanolo-tena hanao fikarohana momba ny fitaovana famolavolana plastika sy ny fanaraha-maso ny fizotrany. Izy io dia manome vahaolana mahaleo tena amin'ny famolavolana bobongolo, teknolojia fitsaboana amin'ny endriny maty ary famokarana automatique feno an'ny milina fahatelo (ladlers, sprayers ary extractors), famokarana mitohy tsy miankina ary famokarana mitohy tsy mifanohitra, fanatrarana unmanned sy mandeha ho azy miasa amin'ny ankapobeny ary akaiky ny fomba famokarana ny sehatry ny indostria 3.0.
02 FITSABOANA SURFACE
Izy io dia afaka mahatsapa ny famokarana kely, ny fanamorana ary ny famokarana betsaka amin'ny fotoana iray.
Ny ambonin'ilay firakotra dia misy fiarovana azo antoka, loko milamina, maharitra maharitra, miady amin'ny bakteria, manohitra loko ary manadio mora foana, manohitra ny rantsan-tànana ary asa hafa. Afaka mahatsapa ny famokarana fiarovana tontolo iainana maitso ny orinasa, ary manakaiky ny famoahana aotra ny rano maloto.
03 METY AMIN'NY FIVORIAMBE IANAO TAMIN'NY TANY
NINGBO RUNNER dia manana atrikasa fivoriambe tsy misy vovoka ary mampiasa fitaovana mandeha ho azy sy semi-automatique mandroso ho an'ny fonosana sy fivoriambe hahafantarana ny fitambaran'ny mpiasa sy ny milina mahomby. Mandritra izany fotoana izany, Weilin dia afaka mamolavola fitaovana sy fitaovana ary mampifangaro ny R&D, ny famolavolana, ny fanamboarana, ny fanangonana ary ny fitsapana ireo fitaovana sy fitaovana amin'ny iray.
Fikarohana mahaleo tena sy fampiroboroboana ny fitaovana maintso
Fikarohana tsy miankina sy fampandrosoana ny teknolojia mamolavola manan-tsaina
Fikarohana tsy miankina sy fampandrosoana ny teknolojia fitsaboana maitso